अर्थ/कृषी Archives - Saptakoshionline
इटहरी । नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रा.लि.ले उत्पादन गर्दै आएको बन्धन सिमेन्ट अब पीपीसीमा पनि उत्पादन गरि बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । ओपीसी र पिएससीमा उत्पादन हुँदै आएको बन्धन सिमेन्ट पीपीसीमा पनि उत्पादन गर्न थालेको कम्पनीले जनाएको छ । पूर्वी नेपाललाई आफ्नो विशेष पकड क्षेत्र बनाएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रा.लि.ले ओपीसी र पिएससी जस्तै पीपीसी सिमेन्टमा पनि गुणस्तरमा ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर र न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय बदर गरेको हो । यसअघि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले मन्त्रालयलको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट ...
काठमाडौं । बजारमा सयपत्री फूलको मागमा कमी र स्वदेशी उत्पादन राम्रो रहेकाले यस वर्षको तिहारमा छिमेकी मुलुक भारतबाट फूल आयात नहुने भएको छ । गत वर्ष तिहारमा २५ लाख सयपत्री माला खपत भएको थियो । यस वर्ष भने बजारमा १५ लाख मात्र मालाको माग छ । मागअनुरुप उत्पादन भएकाले आयातित फूलको आवश्यक नहुने बताइएको छ । तिहारमा प्रयोग हुने सयपत्री, मखमली र गोदावरी फूलमध्ये सयपत्री मात्रै भारतबाट ल्याउने गरिएको थियो ...
काठमाडौं– आफूले खाइनखाई जम्मा गरेको पैसा सेयरमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहन्छ भने शेयरमा लगानी गर्नु भन्दा पहिला यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु १. सार्वजनिक निष्काशन ( Public Issue ) भएको समयमा धितोपत्र खरीद गर्दा : निष्काशनकर्ता कम्पनीको विवरणपत्र अध्ययन गरी कम्पनीको कार्य सम्पादन स्थिति, वित्तीय स्थिति (नेटवर्थ, नाफा नोक्सान स्थिति आदि),...
सुनको भाउ बढ्यो, कति छ आजकाे मुल्य ?
नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन तोलामा ९५ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९५ हजार कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी तोलामा १२४० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि मंगलबार चाँदी १२१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय: विश्‍व बैंकसँग २० करोड ऋण लिने निर्णयमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन्। बुधबार मात्रै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका पौडेलले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सपथ लिएलगत्तै मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमा पुगेर पदबहाली गर्दै पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। उनले विश्व बैंकसँग २० ...
कृषक यसकारण छाड्दैछन पुर्वीमा जुट खेती
धान र गहु पछि प्रमुख नगदेवालीको रुपमा पुर्वी नेपालमा प्रख्यात जुट खेती पछिल्लो समय धेरै परिश्रम,श्रमिक अभाव र सरकारको अनुदार नितिका कारण निरन्तर घटिरहेको छ । कुनै समय जुट खेती का लागि उर्वर भूमि मानिने पुर्वी नेपालको मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा पछिल्लो समय जुट खेती घट्दै गएको छ । जुट लगाउनेदेखी पानीमा हालेर रेसा छुटाउने वेला सम्म धैरै मजदुरको आवश्यत्ता पर्ने यो खेतीमा पछिल्लो समय मजदुरको अभाव, ...
धानमा दाना लाग्ने बेला टढुवा रोगको प्रकोप, सुनसरीका किसान चिन्तित
गहुमा रोग लागेर घाटा व्यहोरेको सुनसरीका किसानकालागी आको आपत आइपरेको छ । यस वर्ष लगाइएको धानमा डढुवा रोग प्रकोपकै रुपमा देखिएपछि सुनसरीका किसान थप चिन्तित भएका छन् । प्रमुख नगदेवालीको रुपमा लगाइने धानमा टढुवा रोग देखीन थालेपछि सुनसरीका किसान चिन्तित वनेका छन् । पुर्वी नेपालको सुनसरी, मोरङ र झापामा किसानहरुले लगाएको धानबालीमा डडुवा रोग प्रकोपकै रुपमा देखिन थालेको छ । धानमा वाला लागिरहेको वेला डढुवा...
काठमाडौं । कुनैपनि बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा थप शुल्क नलाग्ने भएको छ । यसअघि कोरोनाको संक्रमणकालमा मात्रै यो व्यवस्था लागू गर्न बैंकहरुलाई निर्देशनजारी भएपनि अब सँधैका लागि निशुल्क गर्न राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका बेला बैंकर्स संघले नै शुल्क नलिने बताएको थियो ।लकडाउन खुलेपछि पुनः शुल्क लिन थालिएपनि राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीको बेलासम्म भन्दै निःशुल...
जानी राखौ बैंक बाट प्राप्त निशुल्क सेवाहरु
बैंकहरुले कुन कुन सेवा संचालन गर्दा शुल्क लाग्दैन ? वा कुन कुन सेवामा शुल्क लाग्छ ? यी कुरा थाहा हुन जरुरी छ । हाल शेवा शुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भारी कटौती गरिदिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरुले विभिन्न शिर्षकमा शेवा शुल्क तिर्दै आएका थिए । बैंकहरुले सेवाशुल्क बढी काट्ने गरेको गुनासाहरु आएपछि हाल राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क कटौती गरेको हो । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनम...